Ukukhathazeka | Impilo Yengqondo Texas | Izimo Ezivamile Zempilo Yengqondo
Abantu abadala baseMelika abangaphezu kwezigidi ezingama-40 banenkinga yokukhathazeka, okwenza lolu hlobo lwesimo sempilo yengqondo luvame kakhulu kulabo abadala kuneminyaka eyi-18 1 . Izinkinga zokukhathazeka zivame ukuqala ngesikhathi sokukhula sekwephuzile noma ebusheni bokuqala, kepha zingaqala noma nini.
Ngeshwa, ngaphezu kwabantu abangama-60% ababhekene nezinkinga zokukhathazeka abakutholi ukwelashwa 1 . Lokhu kuyinhlekelele yangempela ngoba lezi zimo ziyelapheka ngokweqile. Siyethemba ukuthi ukwandisa imfundo ngokukhathazeka kanye nokwelashwa okuningi okutholakalayo kuzoholela ekutheni abantu abaningi bathole usizo abaludingayo.
Ukwesaba nokukhathazeka, ezimweni ezithile, akuyona into okufanele ukhathazeke ngayo. Ukwesaba kubangela impendulo yethu yemvelo “yokubaleka, ukulwa, noma ukubanda”, okusilungiselela ukuthi sibalekele noma sihlale silwe nosongo olukhulu. Ukwesaba nokukhathazeka kuyizimpendulo eziguqukayo ezidingekayo ukuze usinde.
Ngaphezu kwe 60 %
yabantu abanenkinga yokukhathazeka abayitholi imishanguzo 1 .
Kodwa-ke, kwesinye isikhathi, abantu banezimpendulo zokwesaba nokukhathazeka ezibangelwa ngaphandle kwezinsongo, noma bangabona usongo luyingozi kakhulu kunalokho oluyikho ngempela. Kubantu abalwa nezimo zokukhathazeka, ukwesaba nokukhathazeka kwabo kuphazamisa amandla abo okusebenza futhi kunciphise amandla abo okujabulela impilo. Ngenhlanhla, kunokuningi kokusekelwa kanye nezinketho zokwelashwa eziningi ezitholakalayo zokulawula ukukhathazeka.
Izimpawu Nezimpawu Ezijwayelekile Zokukhathazeka
Uvalo noma ukwesaba
Ukuzizwa unovalo, ukuphumula, noma ukushuba
Ukubanda, ukuba ndikindiki, noma ukuncinza ezandleni kanye / noma ezinyaweni
Unenkinga yokulawula ukukhathazeka noma ukucabanga ngezinye izinto ngaphandle kokukhathazeka
Ukuba nesifiso sokugwema izinto ezidala ukukhathazeka
Ngemininingwane eyengeziwe ngokukhathazeka nezinhlobo ezahlukahlukene zokwelashwa ezitholakalayo, vakashela:
Isikhungo Sikazwelonke Sezempilo Yengqondo (NIMH) ikhasi ku Izinkinga zokukhathazeka.
Inhlangano Yokukhathazeka Nokucindezeleka YaseMelika (ADAA) imininingwane ejwayelekile yokuphazamiseka kokukhathazeka.
Inhlangano Yokukhathazeka Nokucindezeleka YaseMelika (ADAA) amathiphu ngamasu okubhekana nezinkinga zokukhathazeka.
IStanford Medical School izinsiza kubazali bezingane ezinenkinga yokukhathazeka.
Nsukuzonke.com uhlu lwezinsiza zokukhathazeka kokukhathazeka.
Imodyuli Yokuqwashisa Ngezempilo ekuziphatheni okuku-inthanethi ngokuKhathazeka Kwexhala .
Uma uhlangabezana nobunzima bokuthola ukunakekelwa noma uma unezinkinga ngohlelo lwakho lwezempilo, i- Umnyango Womshuwalense waseTexas kanye ne- IHhovisi LeKhomishini Yezempilo Nemisebenzi Yabantu yaseTexas lika-Ombudsman kungenzeka ukwazi ukusiza. Bangakusiza nokuthi ufunde kabanzi ngamalungelo akho.
Inhlangano Yokukhathazeka Nokucindezeleka YaseMelika: Amaqiniso Nezibalo.
Funda kabanzi mayelana nokukhathazeka nezinye izimo zempilo zokuziphatha e-eLearning Hub yethu. Izifundo ezisheshayo, ezifundisayo zenzelwe ukukuhlomisa ngolwazi, izinsiza kusebenza, nethemba ngekusasa – lakho noma lomunye umuntu omkhathalelayo.
Vakashela i-eLearning Hub